Translatium, mushanduri wedesktop yemitauro inopfuura 90 | Linux Vakapindwa muropa
Translatium, muchinjika-chikuva desktop mushanduri wemitauro inodarika makumi mapfumbamwe
Indaneti yakaita kuti nyika ive diki. Kusvikira yasvika, zvaingove zviripo izvo zvataive nazvo pamberi pedu, asi ikozvino isu tinogona "kufamba" chero kupi zvako pasi kubva kukomputa yedu, smartphone kana piritsi. Kana isu tisingatenge chinhu chekufamba, isu tinofanirwa kubvuma nhasi isu tinogona kuverenga mapeji ewebhu kubva pasirese pasirese, chimwe chinhu chisingagone tisingazive mitauro yakasiyana kana kushandisa muturikiri akanaka senge Shanduro.
Translatium inotaridzika zvakanyanya seGoogle Translator, asi inoshandisa chaizvo Yandex Mushanduri kududzira. Yandex Iyo chikuva cheRussia icho, sekuGoogle, tinogona kutsvaga mapeji ewebhu, mifananidzo, ine tsamba, mepu uye, kubva pane zvandinoona kana ndichitarisa kuti ndinyore chinyorwa ichi, ivo vatangisa yavo yewebhu browser yeLinux. , ikozvino mubeta (pamwe ini ndinonyora chinyorwa). Iko kunyorera kuri nyore uye zvakangofanana nekupinda muwebhu webhu, nemusiyano watinogona kuushandisa pasina kuvhura Firefox kana Chrome.
Translatium, dudzira zvinopfuura mitauro makumi mapfumbamwe neYandex
Pamwe, chinonyanya kusuwa mushure mekuisa Translatium ndechekuti, kunyangwe chiri chirongwa chekududzira, chiri muChirungu uye hapana nzira yekuzviisa muchiSpanish. Izvi zvinogona kutikanganisa pakuedza kutsvaga mutauro, nekuti, semuenzaniso, isu tichafanirwa kutsvaga "Spanish" uye kwete "Spanish". Kana tikakunda iro "diki" dambudziko (diki kune avo vedu vanoziva zvishoma Chirungu), zvese zvimwe zvichave zvakapusa: isu tinoisa izwi kana chirevo kumusoro uye dudziro ichaonekwa pasi. Inotsigira inopfuura mitauro makumi mapfumbamwe (iripo pano) uye ine sarudzo yekuzvionera wega mutauro.
Translatium inotipa mabasa akadai se:
Inopfuura mitauro mazana maviri.
Input mutauro auto-kuona.
Dudziro kubva pamufananidzo.
Kuverenga dudziro nenzwi.
Kubvira kwekuchengetedza shanduro.
Inotsigira split screen uye yakazara skrini.
Themes uye mavara.
Mano ekukopa shanduro ku clipboard.
Translatium ndeye muchinjiko-chikuva application uye inowanikwa yeWindows, macOS, uye Linux. MuLinux tinogona kuisa yayo Snap package nekuvhura terminal uye typing:
Ungasarudza here kushandisa Translatium kana mumwe mushanduri wedesktop kana kuzviita kubva kubhurawuza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Translatium, muchinjika-chikuva desktop mushanduri wemitauro inodarika makumi mapfumbamwe